बाँझोपन समस्या भएका महिलालाई बढी मानसिक यातना |
बाँझोपन समस्या भएका महिलालाई बढी मानसिक यातना
बाँझोपनमा पुरुष र महिला दुवैको भूमिका बराबर : चिकित्सक
प्रकाशित मिति :2015-12-20 13:02:08
सुनसरी, पुस ५ । तेह्रथुमकी ५० वर्षीय जितमाया लिम्बूले २८ वर्षको उमेरमा आफूभन्दा दोव्बर उमेर बढी भारतिय आर्मीका पेन्सनरसँग विवाह गरिन् । आफू २८ वर्षको उमेरमै विवाह भएपनि उनी पट्टी कुनै सन्तान जन्मिएनन् । सात वर्षअघि उनको श्रीमानको मृत्यु भयो । उनको श्रीमानको मृत्यूपछि उनले आफ्नो श्रीमान त गुमाईन श्रीमान छँदा समाजले दिएको सम्मान पनि विस्तार विस्तारै गुमाउँदै गईन ।
श्रीमानको मृत्यु लगतै जेठी पट्टीको छोराले जितमायालाई ‘वोक्सी’ ‘मेरो बाउलाई खाएर मारिस् तँलाई पनि मार्छु’ भन्दै रातदिन गाली गलौज गर्दै कुट्न थाले । दुई वर्षअघि उनको जवान नातिको मृत्यु भयो । प्राकृतिक रुपमै भएको उनको मृत्युको दोष फेरि पनि जितमाया कै टाउको गयो । नातिको मृत्युपछि त झन् छोरावुहारी दुवै मिलेर शारिरीक तथा मानसिक यातना दिन थाले । जण्डीसले थलीएकी उनले पलपल मृत्युलाई गुहारीन् । उनीसँग उपचार गर्ने नत पैसा थियो नत स्याहार सुसार गर्ने आफन्त र छर्छिमेकी नै ।
केही महिना अघि विरामी अवस्थामै भेटिएकी उनले भनेकी थिईन्, ‘सन्तान नभएककै कारणले मलाई छिमेकी र आफन्तले बोक्सी भने, कसैले खानेकुरा खाईरहेका छन् भने मैले देख्दा पेट दुख्छ भन्दै हतार हतार लुकाउँछन् । मेरो सन्तान नहँुनु नै मेरो पाप हो या मलाई भगवानले दिएको सराप । यति भनि नसक्दै उनको आँखा रसाएर आए र उनी कोल्टे फर्किएर सुकसुक रुन थालिन् ।
उदयपुर घर भई हाल धरानमा बस्दै आएकी ३४ वर्षीय मनकला राईले विहे गरेको १४ वर्ष भयो । विवाह गरेको यतिका वर्ष वित्दा पनि उनको कुनै सन्तान जन्मिएका छैनन् । गरिखाने उनको श्रीमान रिक्शा चलाउछन् । मनकलाको सन्तान नजन्मीएपछि उनलाई घरपरिवार र आफन्तले विभिन्न किसिमको मानशिक यातना दिईरहन्छन् । ‘तेरो बच्चा भएन, श्रीमानलाई अर्को विवाह गर्न दे, लगायतका कुराहरू बारम्बार सुनिरहदाँ उनलाई दिक्क लाग्ने गरेको मनकलाले बताईन् ।
धरानस्थित विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्त्री तथा प्रसुती विभागमा उपचारका लागि आएकी एक महिलाको स्वास्थ्य चेक जाँच गर्दै चिकित्सक ।
उनले भनिन्, ‘घर नगएको पनि १० वर्ष भयो । बच्चा नभएसम्म घर फर्किएर नआईज भनेर सासु सुराले भनेका छन् । मेरा रहरले होईन, कसलाई सन्तानको रहर हुँदैन र सासु ससुरा र परिवारले श्रीमानलाई अर्को विवाह गरिदिनु पर्छ भनेर रातदिन किचकिच गरिरहन्छन्, बच्चा नहुँदा त महिलाको अस्तित्व नै हुन्न कि क्या हो ।’
धरानकी ६२ वर्षीय दिलमाया गुरुङको दैनिकी पनि कम पीडादायी छैन । १६ वर्षको हुँदा लाहुरेसँग मागी विवाह गरेकी उनको विवाह गरेको १० वर्षसम्म पनि सन्तान नजन्मीएपछि उनले आफ्नै सहोदर बहिनीसँग आफ्नो श्रीमानको विवाह गरिदिईन् । उनलाई ‘सन्तान जन्माउन नसक्ने आईमाईको के काम’ भनेर रातदिन मानशिक यातना उनका परिवारले दिनेगरेको उनले बताईन् । सन्तान विहिन बन्न पुगेका लिम्बू, राई र गुरुङ जस्तै सन्तान नभएका महिलालाई नेपाली समाजमा विभिन्न किसिमको यातना दिई उनीहरूको अस्तित्वलाई नै मेट्न खोज्ने प्रचलन बढी छ ।
बच्चा जन्माउन नसक्नुमा महिला र पुरुषको वरावरी भूमिका हुने गरेको गरेको विपि कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका स्त्री तथा प्रशुती विशेषज्ञ प्राध्याप डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले बताए । उनका अनुसार बाँझोपन हुनुमा महिलाको ४० प्रतिशत, पुरुषको ४० प्रतिशत, दुवै तिर १० प्रतिशत र कारण थाहा नभएको १० प्रतिशत भूमिका रहने गर्छ ।
डा. रेग्मीले भने, ‘सन्तान नभएका जोडीले श्रीमतीलाई मात्र जाँच गराउन पठाउने तर आफ्नो जाँच गर्न नमान्ने भएकाले दोष जति सबै महिलालाई दिने गरिएको आम प्रचलन रहेको छ । यसका लागि श्रीमान श्रीमती दुवैले जाँच गराएमा ९० प्रतिशत वाँझोपनको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।’
उनका अनुसार वाँझोपना महिलाले चाहेर भएको होइन । तर, नेपाली समाजले पूरुषलाई जहिल्यै माथि राखेर हेर्ने र महिलालाई जहिले पनि तल राखेर हेर्ने गरेकाले बाँझोपनको दोष महिलालाई मात्र लाग्ने गरेको छ । सन्तान जन्माउन नसक्नुमा दुवैको भूमिका बराबर रहन्छ भन्ने ज्ञान हुँदा हुदै पनि कतिपय शिक्षित र चिकित्साशास्त्रका पुरुष विद्यार्थीहरू पनि महिलालाई दोष दिएर आफु सन्तान जन्माउन नसक्ने जस्ता पुरुषत्व बिहिनको आरोपबाट मुक्त हुन चाहने गरेको डा. रेग्मीले बताए ।
उनले भने, ‘धेरैले श्रीमान र श्रीमतिमा अण्डकोष, डिम्बासय, पाठेघरमा के खरावी छ भन्ने जाँच नै नगरि सन्तान नहुँदा साथ विषेश गरी घरका सासुले छोरालाई अर्को विवाह गर्न बाध्य बनाउने चलनले समाजमा महिलाले महिलालाई नै अत्याचार गर्ने गरेका छन् ।’ उनले बाँझोपनको उपचार गर्दा सन्तान जन्माउन सक्ने महिला पनि उपचार अभावमा बाँझोपना भई मानसिक यातना सहनुपर्ने वाध्यता खेप्नु परेको बताए ।
डा. रेग्मीका अनुसार महिलामा बाँझोपन हुनुको प्रमुख कारणहरू पिसावको संक्रमण, पाठेघरको संक्रमण, डिम्वबाहिनी नलीमा संक्रमण, पाठेघरमा ट्यूमर भएमा, पाठेघरको टिवी भएमा र हर्मनको असन्तुलनले गर्दा डिम्व नवनेमा हुन सक्छ । पुरुषमा शुक्रकिट निस्कने नलीमा संक्रमण, शुक्रकिटको क्वालीटि राम्रो नभएमा र जन्मजातै पनि शुक्रकिट उत्पादन गर्न नसक्ने भएमा सन्तानोत्पादन हुँदैन ।
सन्तान उत्पादनका लागि श्रीमान श्रीमति बीचको सहवास हुँदा पुरुषबाट पाँचदेखि छ करोड शुक्रकिट निस्कने र ती मध्ये एउटा मात्र जुन गुणस्तरीय बलियो शुक्रकिट हुन्छ त्यो महिलाको डिम्बासय नलीमार्फत् गएर ओभरीबाट निस्कने डिम्बकोश संग मिलेपछि गर्भाधान हुन्छ ।
उनका अनुसार श्रीमान श्रीमति एक वर्षसम्मसंगै रहेर सन्तानोत्पादनका लागि सहवास गरेपनि कुनै गर्भाधान नभएमात्र बाँझोपना भएको मान्न सकिन्छ । तर, पछिल्लो समयमा श्रीमान वा श्रीमति विदेश जाने वा जागिरको शिलशिसालमा वर्षमा एक दुई महिनामात्र भेटघाट हुने क्रम बढेकाले यस्तो अवस्थामा पनि सन्तानोत्पादन नहुने डा.रेग्मीले बताए ।
जन्मजातै बाँझोपना नभई अन्य कारणले भएको बाँझोपन भएमा समयमै उपचार गराए सन्तान जन्माउन सकिने रेग्मीेले बताए । विपि प्रतिष्ठानको स्त्री तथा प्रसुती विभागमा दैनिक उपचार गर्न आउने २ सय ५० जनामा प्रत्येक दिन ५ देखि ६ जोडी बाँझोपनको समस्या लिएर आउने गरेकोे उनले बताए । उनले भने ‘ती मध्ये ३० प्रतिशत जोडीमा श्रीमतीलाई मात्र चेकजाँचमा पठाउने तर, आफु नआउने गरेका छन् ।’
प्रकाशित मिति २०७२ पुस ५ गते आइतवार